RASMI: Ku guuleystaha Koobkii Adduunka ee 2014, Toni Kroos oo ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah – Gool FM
Haaruun July 2, 2021
(Munich) 02 Luulyo 2021. Ku guuleystaha Koobkii Adduunka iyo khadkii dhexe ee Germany, Toni Kroos ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah, kaddib markii uu xulkiisa qaranka Jarmalka u saftay 106 kulan.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa la warinayey in Toni Kroos uu ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee xulkiisa qaranka Germany, waxaana uu 31-sano jirkaan ku dhawaaqay maanta inuu ka fariistay ciyaaraaha heerka caalami ee qarankiisa.
31-sano jirkaan ayaa horay u sheegay inuusan qorsheyneynin inuu xirfaddiisa ciyaaraha caalamiga ah kaga baxo da’da soddomeeyada.
Yeelkeede, haatan waxa uu shaaciyey inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah isagoo kaliya jira da’da 31-ka sano, kaddib markii ay ka soo hareen ciyaaraha koobka qarammada Yurub ee Euro 2020.
Kroos waxa uu xulkiisa Jarmalka u ciyaaray daqiiqad kasta oo koobkan Euro ah, laakiin waxa uu haatan ka fariistay xulka uu hoggaamiyo Macallin Joachim Low kaddib markii ay guuldarro kala kulmeen kulankoodii ugu dambeeyey dhiggooda England ciyaartii ka dhacday garoonka Wembley ee dalka Ingiriiska.
Kroos ayaa ku guuldarreystay inuu hal shuut oo bartilmaameed toos ah sameeyo intii lagu guda jiray tartankan, laakiin xiddigan oo waqti qurux badan ku qaatay xulka lagu naynaaso Die Mannschaft ayaa shaaciyey go’aankii uu kaga fariistay qarankiisa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ayaa 106 kulan u saftay xulkiisa qaranka Germany, waxaana uu ka mid yahay liiska todobada xiddig ee ugu safashada badan taariikhda xulka qaranka Jarmalka, waxaana xitaa safashada xulka ku wehliya xiddiga ay ka wada tirsan yihiin Kooxda Bayern Munich ee Thomas Muller.
Kroos wuxuu haatan ku faanaa uu hal mar Koobka Adduunka kula guuleystay xulkiisa Jarmalka sanadkii 2014-kii, waxaana ciyaaryahankan uu xulkiisa Germany u dhaliyey 17 gool oo uu ku jiray goolkii caanka ahaa ee laadka xorta ah oo uu ka dhaliyey xulka Sweden Koobkii Adduunka ee 2018-kii.
Waxa uu ka mid ahaa Kroos xiddigihii xulka qaranka Jarmalka ee sanadkii 2014-kii Lionel Messi iyo Xulkiisa Argentina ka qaaday Koobka Adduunka, laakiin hadda waxa uu ka fariistay xulka Jarmalka isagoo da’diisu ay weli yar tahay.